Vondron-jazalahy K-POP 5 malaza amin'ny 2021 hatreto - Pop-Kolontsaina
Vondron-jazalahy K-POP 5 malaza amin'ny 2021 hatreto
Miaraka amin'ny topan'ny BTS Butter ny tabilao Billboard Hot 100 mandritra ny fito herinandro misesy, ny K-POP dia nanjary sehatra afovoany manerantany. Ity misy lisitr'ireo vondrona bandy zazalahy K-POP 5 ambony araka ny voatanisa Ny Ivon-toeran'ny orinasa Reputation an'ny orinasa any Korea .
Ny tatitra dia namintina ny ambony K-POP vondrona tarika zazalahy mifototra amin'ny famakafakana angona angon-drakitra, miaraka amin'ny angon-drakitra voaangona teo anelanelan'ny volana Jona sy Jolay 2021. Ny laharana dia miorina amin'ny data 59.599.283 lehibe nangonin'ny The Korea Institute of Corporate Reputation.
Vondron-tarika ankizilahy K-POP ambony amin'ny taona 2021
Tarika K-POP BTS , mandrafitra ny RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V, Jungkook, no laharana voalohany, ary hoy i Soompi, ity no volana faha-38 nisesy nahatratraran'ny tarika ny zava-bita.
Lahatsoratra zarain'ny tompon'andraikitra BTS (@ bts.bighitofficial)
Nahazo mari-pankalazana marika 14995.148 ny tarika tamin'ny Jolay.
Ny index media ho an'ny K-POP ny tarika dia nisaina tamin'ny 4.116.562, raha ny index an'ny vondrom-piarahamonina an'ny tarika kosa BTS 'fifandraisana amin'ny fanbase azy amin'ny 4,249,820.
Ahitana teny lakile mafana sasany mifandraika amin'ny tarika ihany koa ny tatitra. Notaterina ho dibera, Billboard, Hot 100 ankoatry ny hafa.
Ny toerana faharoa dia nalain'i SEVENTEEN. Ity tarika K-POP ity dia misy mpikambana S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon ary Dino.
Lahatsoratra zarain'i SEVENTEEN (@ saythename_17)
Ny mari-pahaizana momba ny lazan'ilay marika dia nisaina ho 3.590 981. Ny fanondroana ny haino aman-jery dia nambara fa 1 731 737 ary ny fanondroam-piarahamonina dia 914.537.
Ny tatitra dia nanamarika ihany koa fa ny index index an'ny vondrona dia nitombo 17,53%. Tamin'ny volana Jona dia 3.590 981 izy io.
Ny toerana fahatelo amin'ny lisitra dia nalain'ny 2PM izay misy mpikambana JUN.K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho ary Chansung.
Lahatsoratra zarain'i real_2pmstagram (@ real_2pmstagram)
Ny indeksan'ny lazan'ny tarika K-POP dia nitombo 243,44% raha oharina tamin'ny volana Jona. Ny fanondroana dia nambara ho 3.557.369.
Ny fanondroana ny haino aman-jery dia nisaina 1.511.427 ary ny taom-piarahamonina dia 646,579.
Nahazo ny laharana fahefatra ny EXO tamin'ny fanadihadihana tamin'ny volana Jolay niaraka tamin'ny mari-panondroana marika 3.557.369.
Lahatsoratra zarain'ny EXO Official (@ weareone.exo)
Ny tarika K-POP ahitana mpikambana Suho, Chanyeol, Kai, D.O, Baekhyun, Sehun, Xiumin, Chen ary Ray dia nandrakitra tahiry media 1 1111 427 narahin'ny index communauté 646.579.
Ny NCT ​​izay misy mpikambana Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Mark, Renjun, Jeno, Haekan, Jaemin, Chenle, Jisung, Lucas, Jungwoo ary Kuhn dia tonga teo amin'ny laharana fahadimy.
Lahatsoratra zarain'ny NCT ​​Official Instagram (@nct)
Nidina 51,63% ny mari-panoratan'ity tarika K-POP ity ary nahatratra 2,963,346. Ny fanondroana ny haino aman-jery dia nisaina ho 751,204 narahin'ny indeks olona 1140742.
Tarika K-POP hafa izay nanao ny lisitry ny top 30
SF9, Stray Kids, MONSTA X, SHINee, Rahampitso X Miaraka, ASTRO, The Boyz, BTOB, Super Junior, Highlight, Infinite, NU'EST, VIXX, ATEEZ, WINNER, ONF, N HYPEN, TREASURE, GOT7, TVXQ, Block B, Pentagon, Ankizy Volamena, 2AM ary Nosy FT.
ny fomba fanaovana fotoana
ahoana ny fomba hitenenana ankolaka ny bandy tianao
tsy laharam-pahamehan'ny sipako aho
ny fomba filalaovana mafy hahazoana fa mahaliana azy foana
fomba hanampiana olona aorian'ny fisarahana